အိုးအူအိုဘုရားကျောင်း ပင်လယ်တွင်း တိုရိအိဂိတ်ပေါက်(ဆဂ)
ဖုအ မုတိုမိတ(ဖူရာနို ဘီအဲအိ ဘွန်းကရော)
တောင်တစ်ခုလုံး လောင်ကျွမ်းပြီး နွေရာသီအစပိုင်းကို အသိပေးတဲ့ ရိုးရာပ...
ရှိဂခရိုင် နှင့် ကျိုတိုဖု ၏ ခရိုင်နယ်နိမိတ်တွင်ရှိနေသော တောင်။ မူလ...
ယာမာနာရှီခရိုင်၊ ဟိုခုတိုမြို့က ခရိုင်မြောက်ဘက် လေးပိုင်းမှာ တည်ရှိ...
အဲဒိုခေတ်မြို့ ပုံစံကို ထိန်းသိမ်းထားသော အရေးကြီးသော ရိုးရာအဆောက်အဥ...
မြစ်မှာ ပျော်ပါးဆော့ကစားဖို့ ဆိုရင် ဒီနေရာက အကောင်းဆုံးပါ။ နိရောဒို...
( မီးခိုးရောင် စက်မှုဇုန် ) ဆိုတဲ့ ပုံရိပ်က အတိတ်က အရာဖြစ်တယ်။ ( စက်ရုံဆွဲဆေ...
ဟိုကိုင်းဒိုး ဘိအဲအိ (ရေကန်ပြာ) Mac၏ မျက်နှာပြင်ဓာတ်ပုံတွင် သုံးထားသော အပြာ...
( စက်ဘီးဖြင့် ကျွန်းတစ်ပတ် ! ) အနုပညာမြောက်တဲ့ကျွန်း ( နအိုကျွန်း ) မှာဆက်ဆ...
တောက်ပသောအလင်းရောင်ဖြင့် (ပိုးစုန်းကြူး)ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနွေရာ...
( အာဂျိဆိုင်းပန်းမှာ အဆိပ်ရှိလား ? ) အာဂျိဆိုင်းပန်းမှာ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ လျှိ...
( မသိသူ မရှိတဲ့ လှပတဲ့ ကမ်းခြေ ) ZEKKEI Japan တည်းဖြတ်အဖွဲ့ က ကြည်လင်သန့် စ...
တကယ့်ကိုမှန်ကဲ့သို့အသက်ရှုမှားလောက်အောင်လှပမှုများဖြင့် လူတွေကို ဆွဲဆောင...